Vula = Ukukhula | Martech Zone
Vula = Ukukhula
NgeCawa, ngoJulayi 24, 2005 NgoMgqibelo, Oktobha 18, 2014 Douglas Karr
Kwangoko kulo nyaka, ndisebenze neqela lesizwe leNFL ukuvavanya iziko ledatha kunye nezixhobo zokuthengisa nge-imeyile. Yayiluvavanyo olubanzi lwezixhobo ezininzi abanazo. Iindawo endijolise kuzo yile:
Amandla okudibanisa izisombululo zangaphandle
Amandla okuzenzekelayo iinkqubo
Ukuphendula kwenkampani ngolawulo lweakhawunti kunye nenkxaso
Ezi zimbini zokuqala zezibonelelo zexesha elizayo. Ndifuna ukuqinisekisa ukuba umbutho usebenza nezisombululo ezamkela ukudityaniswa kunye nokuzenzekelayo, nangona amanqaku abo okwangoku ebengenakuba ukuya kukhuphiswano. Kuyimpikiswano enzima ukwenza ukuba abantu baqonde, kodwa iinkampani zinobuchule obuphambili. Xa beqala ukusebenza ngaphandle kobuchule obuphambili bokuvelisa ingeniso eyongezelelweyo, baqala ukuyenza buthathaka imveliso yabo engundoqo kwaye baya kuba nokhetho lweemveliso ezibonisa ukuba zizityebi, kodwa zihlwempuzekile kuyilo, inkxaso nenkqubela phambili.
Ubume betekhnoloji yanamhlanje buyatshintsha. Ndingathanda ukuba iinkampani zivule iitekhnoloji ezinokuzenzekelayo kwaye zidityaniswe kakuhle, kuneemveliso ezizityebi.
Ekugqibeleni, inkampani yathatha ingcebiso yam. Endaweni yokusebenza kwisisombululo esinye, baqale ukusebenza kwizisombululo ezi-3 ezahlukeneyo, kwaye enye engafumanekiyo ngoku, ijikeleze ikona. Amatikiti abo enziwe kwinkqubo yabo yamatikiti, uLawulo lwaBudlelwane baThengi lwenziwa kwinkqubo yabo yeCRM (iSalesforce), kunye neSisombululo sabo seNtengiso nge-imeyile senziwe kwiSisombululo sabo sokuThengisa nge-imeyile (Exacttarget). Isisombululo se-4 sisisombululo sekhaya esikwi-Intanethi, into esingayibonanga ukuza kuthi ga ngoku.
Kwisithuba seveki yokudityaniswa kokuqala, sasine-imeyile ngaphandle komnyango wokuphucula unxibelelwano nabaphethe iTikiti labo lonyaka. Ngoku sisebenzela ukudibanisa isiseko sedatha sabo setikiti kwiCRM yabo… umceli mngeni kukuba inkqubo yamatikiti ayidibanisi. Ngelishwa kwaye ibonwa njengesithintelo sendlela ekuphuculeni okuqhubekayo kwinkqubo.
Inkampani yetikiti inokufuna ukuphinda icinge isicwangciso sayo kwaye inamathele kubuchule bayo, kungenjalo omnye umntu uza kuza nesisombululo esiza kudlala kakuhle kwaye sithathe indawo yabo.
tags: Apiisinxulumanisi senkqubo yekhompyuthaukukhulaisoftware emanyanisiweyoukudityaniswavula isoftware
Isiselo sakusasa esitsha - ngumbethe weentaba?